Duutanii Jirtu Garuu Ammas Itti Fufaa - Caboowanci.com-Oromia
Duutanii Jirtu Garuu Ammas Itti Fufaa
July 27, 2016 Nadhani	0 Comments OLF, OMN, Oromia
Yeroo amma kanati mootumman wayyane haala adda addaatin rakkoo ofii keessa qabu muldhiffachaa jiru. Haalii isaa du'aa jirtuu ammas itti fufaa dha ergaan isaa.Oromia dhan wal qabatee keessayyuu Ummanni Oromo biyya Ethiopia kana keessati Diinagiddeedhaanis, Siyyaasanis fi Seenaaf adaa dhaan akka addan qoodaman , Seenaa ergisaa ta’een akka jiraachaa turan , Bulchiinsa haqa irrati hin hunddoofinneen akka bulaa jiran, Ofiin of bulchuu akka hin dandeenye, Dandeetti ofiin murteessuf murtii argachuu akka hin dandenyee, fi KKF yeroo adda addaa fi bakka addaa addaa irratti kaassa jiru.
Kana hundaa kan raawwachaafi godhaa ture ilmaam Tigrotaa kan ta’an TPLF dha. Amma irraa as garagarranii Ummanni rakkoo amma kana ga’uuf saaxxilamme tokko maal akka gochuu danda’uu ifa fi ragaa bahaa jiru. Ummanni Oromoo qabixxiiwan armaan olitti ka’ee irraa adda waan bahaniif akka lammii biyya biraatti ofi lakkaawwa jiru kanaan kan ka’ee akka salphaatti wal simatee wajjin jirraachuu irra akka salphaatti waan xiqqoo sababa godhatee ykn kaasee wal loluu, addaan wal faccaasuu, fi gar gar bahuu filataa akkasumas illee Ethiopa irraa fottoquuf tataafii gochaa jiru jedhu.
Ammas as deebi’anii moo Oromoon dhiphoo dhaa bulchiinsa nuti baasinnen, diinaggiddee nu keeninuun, karaa nu baasinuun, fi ergamitoota ta’anii jiraachuu qabu jedhu. Isaan enyuudhaa Oromoo irra adda ta’anii Oromoo bulchuufi caasaa isaan diriirsaniin Ummanii amma kanaa ittin buluu qabuufi deemuu qabu maalidhaa jedhanii ofi gaafachuun isaan irra maqaa dhiphaafii maqaa farra misoomaa jedhanii isaanu erga addaan baasanii turanii jiru.
Irra deebi’uudhaan akka waan isaan qofa biyya Ethiopia jedhamittu kanaaf yaaduu, akka isaan qofitti yoo bulchuu baatte biyyi kun badduu, akka waan wagaa 25fii misoomaafi haqa biyya kana irratti fidanii, fi akka isaan qofitti amanamoota ta’anii dubachaa jiru. Kan ta’uu ta’ee irra deebi’amee rakkoofi gaafiin abban biyyumma Oromia keessatti ta’aa jiru kana ukkamisuufi addabiin addaa addaa oolee otuu hin buliin akka ilaalchaa isaanitti fudhatamuufii siraa’uu qabu dubachaa jiru.
Kan bayyee nama gaddisiisuu rakkoo isanii ofii fudhachaa, diinaggiddee amma jiru monophooliin qabachaa akka jiran amanaa fi rakkina biyyatti keessati dhalateefi ta’aa jiru sababa isaa otuu beekaa jirannu amma moo deebi’anii Oromia irratti haala dukkana ta’eefi dhokkisaa ofi keessa qabuun duula akka haaraatti bannuufi qopha’anii jiru. Kana jechuun eyyen dhugaadha mirga qabdu, gaafii sirii dhiheesitan, samamitanii jirtu, hidhamitanii jirtu, duutanii jirtu, garuu ammas itti fufaa jechuu isaniitti. Kanaaf ammam qophoofinne jira?
← OPDOn Biyya Gurguraa Jirti
ወያኔ አልሚ ኦሮሚያ አዉዳሚ እና ጎንደር ሰላማዊ ሰልፍ የለም የተባለዉ →